1। Epithalon Acetate के हो?
2। एपिथलन एसीटेट एक्टिफिकेशन
3। Epithalon Acetate को आवेदन
4। सन्दर्भको लागि Epithalon Acetate उपयोग
5। Epithalon Acetate फायदाहरू
6। Epithalon Acetate साइड-प्रभाव
7। Epithalon Acetate भण्डारण अवस्थाहरू
8। एपिथलन एसीटेट औषधि किन्नु हुन्छ?
के तपाईंले कहिल्यै सुन्नुभयो? Epithalon एसीटेट? के तपाईं यसको परिक्षण गर्दै हुनुहुन्छ र यसको बारे सबै जान्न चाहानुहुन्छ? यदि हो भने, त्यसपछि यो लेख तपाईंलाई Epithalin Acetate को बारे मा थाहा दिनुमा तपाईंलाई मद्दत गर्न जाँदैछ। यस लेखमा यस औषधिको बारेमा पूर्ण ज्ञान हुनेछ। यस लेखका विभिन्न भागहरू निम्नानुसार हुनेछन्:
1. Epithalon Acetate के हो?
Epithalon एसीटेट (सीएएस: 307297-39-8) एक पेप्टाइड को एक प्रकार हो र यो पनि को रूप मा जानिन्छ विरोधी उमेरको औषधि। अन्य नामहरू जसको यो औषधि ज्ञात छ Epithalon, Epithalone, Ala-Glu-Asp-Gly, UNII-O65P17785G र धेरै धेरै। यो ज्ञात छ कि एपिथलोन एसीटेट, सेन्टोरगोल्युशन र बायोरेगोलोलोजी सेन्ट पीटर्सबर्ग इन्स्टीट्यूट द्वारा विकसित गरिएको छ। यो औषधि एक सानो ग्रंथि को एक घटक सक्रिय घटक हो जुन हाम्रो दिमाग मा पाइनल ग्रैंड को रूप मा जानिन्छ। केही राम्ररी अनुसन्धान पछि, यो पाइन्छ कि यो ड्रगले 60-80years को व्यक्तिका व्यक्तिहरु को रक्त कोशिकाहरु मा टेलिमेरी को लंबाई बढ्छ। एउटै अध्ययनमा, यो फेला पर्यो कि उन व्यक्तिहरु मध्ये जसको यो दबाइ दिइएको थियो 90% व्यक्तिहरु लाई सकारात्मक परिणाम दिखाए।
वृद्ध समूहका रक्त कोशिकाहरूमा टेलोमेराहरूको लम्बाइ बढाएर, यो शरीर र कायम राख्न स्वस्थ रहन मद्दत पुर्याउँछ।
अहिले सम्म, हामी जान्दछौं कि यस औषधीले जीवन बचाउन सक्छ र उच्च गुणस्तर विरोधी उमेरको औषधिको रूपमा काम गर्न सक्छ। अर्को बिन्दुमा, हामी एपिथलोन एसीटेट औषधिको तन्त्रमा छलफल गर्न जाँदैछौँ।
2. Epithalon एक्टिटेट तंत्रको क्रियाकलाप
यस बिन्दुको मद्दतमा, हामीले कार्यविधिको बारे मा जानकारिता वा एपिथलन एसीटेट औषधिको कामको बारेमा जान्नेछौं। Epithalon एसीटेट एक सेतो पाउडर जस्तै देखिन्छ, यो पाउडर पानी संग मिश्रित हुन सक्छ, तर केहि अवस्थामा, यसलाई एसिटिक एसिड को हल्का 1% समाधान संग मिश्रण गर्न मनपर्छ। यो औषधि कोठाको तापमानमा पूर्ण स्थिर छ। Epithalon एसीटेट ड्रगको तत्व Epitalon ((S) -4- (S) -2-aminopropanamido) -5 - ((एस) -3-carboxy-1 - ((कार्बोक्सिथाइल) अमीनो) -1-ओक्सप्रोप्यान-2 -yl) एमिनो) -5-oxyopentanoicacid)। यस औषधिको वास्तविक तन्त्रणा यो हो कि यो रोगीको शरीर भित्र जान्छ जुन केहि विशेष वा धेरै रोगहरू छ, रोगीको शरीर भित्रै पछि यसले प्रत्यक्ष अंग वा ऊतक आक्रमण गर्दछ। यदि सिधा फैलाउने कोशिकाहरू सिधा मार्छ भने, गरेर यो ठीक तरिकाले रोगलाई मार्छ।
3. आवेदन Epithalon Acetate
यस समयमा, हामी एपिथलसन एसीटेटका अनुप्रयोगहरूको बारेमा थाहा पाउनेछौं।
विरोधी उमेरयो औषधिको पहिलो आवेदन हो कि यो विरोधी बुढापुस्तक प्रक्रियामा मद्दत गर्दछ। यो औषधि व्यापक रूपमा यस कारण ज्यादातर विश्वका लागि प्रयोग गरिन्छ। Epithalonacetate औषधि यस्तो प्रयोजनको लागि उत्तम छ, विश्वभरि धेरै प्रकारको शोध भइरहेको छ, र हरेक अध्ययनको नतिजा अत्यन्तै सकारात्मक छ, त्यहाँ कुनै पनि नकारात्मक मामला छैन, कि अनुसन्धानमा आयो।
एन्टिओक्सिडेंट- एपिथलसन एसीटेट औषधिले एन्टीएक्सडिन्टको रूपमा पनि काम गर्दछ। यस औषधिमा रहेका चीटियाक्सिडेंटको मद्दतमा धेरै मानिसहरूले धेरै फाइदा पाएका छन्। यी एन्टिओक्सिडेंटको सहयोगमा, हाम्रा दैनिक कार्यका हाम्रा शरीर कक्षहरूमा हुने क्षति ढिलो हुन्छ। यसले हाम्रो शरीरको कक्षहरूको हानिकारक हुनमा घट्दै हाम्रो समग्र स्वास्थ्य बढाउन मद्दत गर्दछ। धेरै अधिक लाभहरू यी Epithalon Acetate लागू औषधिहरू हुन्, जसले त्यहाँ रोजगारीका लागि धेरै मानिसहरूको सहयोग पुर्याउँछ।
Telomereयस औषधिको अर्को आवेदन भनेको रक्तचापमा टेलोमेराको लिङ्ग्रोम बढाउन मद्दत गर्दछ। यो उद्देश्यको लागि औषध केवल XTUMX देखि 65 वर्ष सम्म उमेरका व्यक्तिहरूलाई दिइएको छ।
अनुसन्धानउद्देश्य- यस औषधिको अन्तिम आवेदन भनेको यो अझै पनि विभिन्न जनावरहरूमा विभिन्न विभिन्न रोगहरूको लागि अनुसन्धान उद्देश्यको लागि प्रयोग गरिँदै छ। अधिकांश अवस्थामा हामी केवल सकारात्मक परिणाम पाइरहन्छौं, र यसले क्यान्सरको कोशिकाहरू र धेरै अधिक रोगहरू पनि बिर्सेको छ, जुन त्यहाँ धेरै औषधिहरू गर्न असमर्थ थिए।
4. Epithalon Acetate फायदाहरू
त्यहाँ भन्दा अन्य एपिथलन एसिटेट ड्रगको धेरै फाइदाहरू छन् विरोधी उमेरको प्रक्रिया केवल, हामी यस औषधिको अन्य लाभहरू छलफल गर्न जाँदैछौं जुन त्यहाँ त्यहाँका मानिसहरूका लागि कम जान्छ-
♦ बढ्दो जीवन
मानवहरूमा यो ड्रगहरू प्रयोग गर्नु अघि, धेरै जनावरहरूमा कुनै पनि जनावरहरू हानिकारक भएकाले अनुसन्धानहरू गरिसकेका छन्; यसैले यी अनुसन्धानहरूको नतीजा उन जानवरहरु को 11centcent को उमेर मा 17 को वृद्धि को रूप मा आयो। विभिन्न जनावरहरूको लागि, क्रिसमसको जीवन फरक थियो।
यी जनावरहरूमा उचित खोजी पछि, त्यस औषधि पछि मानिसहरूको लागि प्रयोग गरिने थियो जुन यस औषधिले सकारात्मक परिणाम पनि देखाएको थियो। त्यसो भए तपाईले जान्नुपर्दछ कि अहिले जीवनको समग्र जीवन लगभग नजिक छ 40 देखि 50 वर्ष धेरै भन्दा धेरै सम्भव छ, यस औषधिको प्रयोगले हामी यो जीवन 16 प्रतिशत सम्म बढ्न सक्छ। जसको साथ जीवन 60-70 वर्ष सम्म पुग्न सक्छ।
♦ एंजाइम गतिविधिमा वृद्धि गर्नुहोस्
जब एक व्यक्ति मा बेच्ने एन्जाइमहरू मा बेचेको बेला एक धेरै गित हद सम्म कम हुन्छ। त्यसो भए, एपिथलन एसीटेट ड्रगले हाम्रो शरीरमा इन्जाइम गतिविधि बढाउन मद्दत गर्न सक्छ।
यी इन्जाइम गतिविधिहरू हाम्रा क्रियाकलाप भित्र हुने सम्पूर्ण कार्यहरूको लागि जिम्मेवार छन् जसको सहायताले हाम्रो शरीरका सम्पूर्ण कार्यहरू पाउँछ। एन्जाइम गतिविधिमा यो कमी एक गम्भीर मुद्दा थियो किनभने मानिसहरू समस्याको पहिचान गर्न असमर्थ थिए त्यसपछि धेरै प्रकारका अनुसन्धान एन्जाइम गतिविधि पछि ज्ञात भयो।
♦ Melatonin स्राव र circadian लय
म पहिले सबैलाई बताउँछु कि माटोटोनिन सनराइज र सर्क्रियन लयहरू छन्। माल्लिनोन पाइनेल ग्रैंडद्वारा उत्पन्न भएको छ, जुन हाम्रो दिमागमा पाइएको छ, यो स्राव आवश्यक छैन, तर यो अत्यधिक आवश्यक छ किनभने यो स्राव धेरै मनोवैज्ञानिक प्रभाव र मानव व्यवहार सम्बन्धित छन्। जबकि circadian लय एक आंतरिक प्रक्रिया हो र पुरा तरिकाले प्राकृतिक हो, यो सबै को नींद जगाने को चक्र मा पाप गर्दछ।
यस अवस्थामा, एथथल एसीटेट ड्रगले विभिन्न प्रक्रियाहरूमा मद्दत गर्दछ जस्तै त्यहाँ कुनै प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव हुने छैन, र यो औषधीले पनि राम्रो निद्रा-चक्र चक्रमा पनि मद्दत गर्दछ। जो कि कठिन समय छ कि त्यस अवस्थामा सुत्न पाउँदा यो औषधी उनको लागि धेरै फायदेमंद छ।
♦ लडाईको क्यान्सर
दर र चूहों मा गरियो शोध को समयमा, उन अनुसन्धानहरु को नतीजे मा, हामीले पाया कि यो एपिथल एसीटेट ड्रग्स यस्तो कोशिकाहरु को उत्पादन गर्दछ जो कैंसर कोशिकाओं को मृत्यु मा मदद गर्दछ। यो जान्न पछि, क्यान्सरको धेरै जनावरहरूले यो औषधिको खुट्टालाई दिएका थिए, र आश्चर्यजनक ढंगले, उनीहरूले पर्याप्त रूपमा उपचार गरे, औषधिले सबै क्यान्सर कोशिकाहरूलाई मर्छ।
यी अनुसन्धानहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि, यो औषधि मानव क्यान्सर रोगीहरूलाई दिइएको थियो, र उनीहरूको अवस्थामा, यो औषधीले राम्रो काम गर्यो, र केहि घटनाहरूमा, यो पनि असामान्य उपचार। यो ड्रग मानव शरीर मा क्यान्सर विकसित गर्ने विशेष ऊतक र जीन मा सीधा काम गर्दछ।
♦ रेटिनाइटिस pigmentosa
यो रोग आँखाको रोग हो; यस अवस्थामा, व्यक्तिको आँखामा उपस्थित छडहरू कम छन्। यो औषधीले यो आँखा रोगको उपचारमा मद्दत गर्दछ। यो बीमारी पनि जनावरहरूमा निको भएको थियो; समेत, जब अनुसन्धान जनावरहरूको स्थान लिईयो, जानवरहरूको 90% भन्दा बढी उचित रूपमा निस्क्रिय थिए। त्यस पछि, जब यो औषधि को लागी मानव रोग को लागी दिइएको थियो 90 को रोगहरु लाई यस रोग देखि उपचार गरियो।
♦ एन्टिओक्सिडेंट सुधार गर्छ
मैले एन्टिओक्सिडेंटको प्रयोग र महत्त्वको बारेमा माथि उल्लेख गरेको छु। तिनीहरू सेल-हानिकारक प्रक्रियालाई ढिलो पार्दछ, जसको मद्दतले हामीले उमेरको प्रक्रियालाई ढिलो गर्दछौं। जब शोधहरू जनावरहरूमा भएको बेला सबै सिसाहरू भेटिए। जान्दिन कि यो औषधि एंटीओक्सिडेंटमा सुधार गर्न मद्दत गर्दछ, यो औषधिले एंटीओक्सिडेंट नभएका जनावरहरूलाई दिएको थियो, र अध्ययन पछि, यो औषधि जनावरको शरीरमा एंटीऑक्सीडेंट सुधार गर्न मद्दत पुग्यो। यस्तो सकारात्मक नतिजा हेर्न पछि यो औषधी रोगीहरूलाई यस्तो रोगसँग दिइयो, यो एन्टिओक्सिडेंट औषधि दिइएको थियो, र यसले तिनीहरूलाई उनीहरूको सेल-हानिकारक प्रक्रियालाई कम गर्न मद्दत गर्यो।
5. Epithalon Acetate साइड इफेक्ट
तपाईं जान्नु पर्छ कि सबै केहि केहि राम्रो र केहि प्रतिकूल प्रभाव पनि छ। यो एथलिलेसन एसीटेट ड्रगसँग सम्बन्धित छ। अहिलेसम्म, तपाईंले यस औषधिको फाइदाहरूको बारेमा जान्नुभएको छ, तर यस समयमा, तपाई औषधीको साइड इफेक्टको बारेमा थाहा पाउनुहुनेछ। धेरै प्रकारका अनुसन्धानहरू गरिसकेका छन्, तर अहिलेसम्म हामीले यो औषधिबाट कुनै साइड इफेक्ट फेला पारेनौं। केवल साइड इफेक्ट हामी पाएको छ जस्तो कि हामीले चर्चा गरे कि एपिथल एसीटेट ड्रगले 60 सम्म 80 वर्ष सम्मको रक्त कोशिकामा टेलिमेरीको लम्बाइको वृद्धि बढाउँछ। साइड इफेक्ट यो हो कि केहि अवस्थाहरुमा, औषधि केहि गलत प्रभावहरु लाई पनि गरेको छ।
यो पक्ष प्रभाव, केहि मामलाहरुमा, यस्तो हद सम्म गएका व्यक्तिहरु को जीवन यस साइड प्रभाव संग गुमाएको छ।
यो एक मात्र पक्ष प्रभाव थियो जुन हामीले धेरै वर्षसम्म यो औषधिको प्रयोग पछि देखेको छौँ। यो औषधी एक जीवन-बचतको औषधि हो, तर यी घटनाले राम्रो प्रदर्शन गर्दैन, वा हामी यो भन्न सक्छौं कि विपरीत उल्लेखित 10% मामलाहरू नजिकै छ, जबकि 90% अवस्थाहरूमा यसले रोगीहरूको समस्या निवारण गर्यो। यो औषधि बनाउँछ। केहि मामलाहरु मा खतरनाक, वहाँ कुनै पनि सुराग किन पाया किन केहि मामलों मा यो दबाइ सही ढंग देखि काम गर्दैन, गलती को घटनाहरु मा धेरै प्रकार को अनुसन्धान गरिसकेको छ, तर केहि हाम्रो हात मा आउँछ।
6. Epithalon aसन्दर्भको लागि cetate उपयोग
प्रत्येक औषधि एक उचित खुराक छ, र यो यस्तो अत्याधुनिक औषधि सही खुराक छ, र यदि कसैले यो दवाईले यो औषधि अनुसार छैन, त्यसो गर्दा तिनीहरू पनि काम गर्न सक्छन्। त्यसोभए हामीलाई यो औषधिको उचित खुट्टाको बारेमा थाहा पाउनुहोस्, कृपया यसलाई राम्रोसँग हेर्नुस्।
यस औषधि को खुराक तपाइँ यस किसिमको किस प्रकारको रोग लागेका छन् को रोगमा निर्भर गर्दछ। त्यहाँ तीन अलग-अलग विधिहरू र तीनवटा प्रकारका खुराकहरू छन्, र तिनीहरू कम प्रभावकारी एक, मध्यम प्रभावकारी एक र सबैभन्दा प्रभावकारी एक हुन्। यो विशुद्ध रूपमा निर्भर गर्दछ कि तपाइँ कुन किसिमको खुट्टा लिनु हुन्छ, तपाईं खुट्टाको बारेमा आफ्नो चिकित्सकलाई सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो कि यो खुट्टा हो:
Epithalon एसीटेट खुराक (कम प्रभावकारी)
अवधि - यो औषधि एक उचित अवधि पछि र कम प्रभावकारी औषधिको लागी लिन सकिन्छ, तपाइँले यो औषधिलाई 10 भित्र 20 दिनमा लिनु पर्छ।
डोजज-यो भनेको हो कि तपाईंले कतिपय औषधि लिन सक्नुहुनेछ, र यो 400 प्रति 600 मिलीग्राम प्रति दिन Epithalon हो।
DailyFrequency- यस औषधि को दैनिक आवृत्ति प्रति सेवा 200 मिलीग्राम हो।
Epithalon Acetate खुराक (मध्यम प्रभावकारी)
यो औषधि पनि नाक स्प्रे वा ड्रप गर्न सक्छ, यस समयमा हामी यस्तो खुट्टाको बारेमा थाहा पाउनेछौं।
अवधि - यस्तो औषधिको अवधि माथिको एक जस्तै हो, जुन बीचमा 10 देखि 20 दिन।
डोजज- स्प्रे र ड्रपको खुट्टा Epithalon एसीटेटेर दिनको 15 देखि 30 मिलीग्राम बीचमा छ।
Dailyrequency- दैनिक आवृत्ति प्रति दिन तीन सर्भरहरूमा विभाजित गर्न सकिन्छ।
इंजेक्शन योग्य Epithalon एसीटेट खुराक (अधिकप्रभावकारी)
खुट्टा कुनाको अन्तिम अन्तिम विधि यो इंजेक्सबल विधि हो। यस विधिमा, औषधि इन्जेक्शन दिइन्छ, र यो विधि सर्वोत्तम र सबैभन्दा प्रभावकारी तरिकाको रूपमा चिनिन्छ। यो विधिको खुट्टा:
अवधि - यस पद्धति को अवधि अन्य विधि को रूप मा एक समान हो, जुन 10 देखि 20 दिन को बीच मा छ।
डोजज-यो विधिको खुट्टा5प्रति दिन 10 मिलीग्राम हुन्छ।
आवृत्ति- यो दबाइको आवृत्ति प्रति दिन एकनिजानुसार निचला खुट्टाको लागि हुन्छ, जबकि प्रत्येक दिन खुट्टाको रूपमा दुई इन्जेक्शनहरू लिन सक्छ।
प्रत्येक विधिको पाठ्यक्रम 10 सम्म 20 दिनको लागि हो, जबकि यो 10-20 दिन पूरा गरे पछि पाठ्यक्रमले 4to6महिनाको एक पूर्ण अंतरसँग सधैै पर्छ, र त्यस पछि, उनि दबाइ दोहोर्याउन सक्छन्। यो सूचना सबै तीन पाठ्यक्रमहरूको लागि हो।
7. Epithalon एसेट स्टोरेज सर्तहरू
तपाईंले केहि दबाइको बक्समा देख्नु भएको छ जहाँ उनीहरूले बोल्ड अक्षरहरू CAUTION मा लेखिएका छन्, त्यस बाकसमा उनीहरूले त्यो दबाइको भण्डारण अवस्था दिए। केहि दबाइहरुमा ती तत्वहरू छन् जुन तिनीहरू कोठाको तापमान भित्र राख्न सक्दैनन्। त्यसैले यस्ता ड्रग्सहरूका लागि, त्यहाँ उपयुक्त परिस्थितिहरू छन् जसमा तिनीहरू राख्नु पर्दछ र मात्र प्रयोग गर्नुपर्दा बाहिर निकाल्न सकिन्छ। यो पनि छ Epithalon एसीटेट भण्डारण अवस्था, हामी यहाँ यी अवस्थाहरू छलफल गर्नेछौं।
यहाँ सुझाव दिइएको एकमात्र शर्त यो छ कि यो फ्रिज जस्तो ठिक ठाँउमा राखिएको हुनुपर्छ। यो भने छ कि यदि एक ठुलो ठाउँमा बढी राखिएको छ, त्यसो गर्दा यसले औषधिलाई क्षति पार्न सक्छ। हरेकमा, त्यहाँ 98% शुद्ध पेप्टाइड्स छ, जुन ठण्डा अवस्था भित्र राख्नु पर्छ र प्रत्यक्ष गर्मी भित्र राखिनु हुँदैन। यसले पेप्टाइडहरूको शुद्धतालाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ।
मनमा राखिएको सुझाव गरिएको मात्र भण्डारण अवस्था थियो।
8. Wयहाँ epithalon एसीटेट ड्रग किन्न को लागी?
त्यहाँ केही अनलाइन रिटेलरहरू छन् जसले यो औषधी बेच्दछ, किनभने यस औषधिले केही विशेष अमीनो एसिडहरू समावेश गर्दछ। त्यसैले यदि तपाइँ एपिथल एसिटरेट औषधि खरिद गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाई यसलाई सजिलै अनलाइन र पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ किन्न epithalon अभिनेता। यो समयको दिइएको अन्तराल भित्र तपाईंको घर पुग्छ।
त्यहाँ धेरै नक्कली व्यक्तिहरू छन्, जो गलत वा नकली औषधिहरू अनलाईन बेच्न सक्छन्, तपाईले यो औषधि किन्ने ठाउँबाट तपाईलाई ठीकसँग कम्पनी र खुदरा विकारको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। तपाईंले कुनै पनि नयाँ व्यवसायीलाई पनि यस्तो नयाँ औषधि प्राप्त गर्नु हुँदैन, किनकि यो औषधी महत्त्वपूर्ण छ र यसले रोगीको जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ, त्यसैले यसका लागि तपाईले सधैँ विश्वास गर्नुपर्दछ र केवल अनुभवी औषधि बिक्रेताबाट औषधि किन्नै पर्छ।
यो सबै एपिथलोन एसीटेट ड्रगको बारेमा थियो, यस लेखमा हामी विभिन्न बिभिन्न चीजहरू बारे जान्न सक्छौं Epithalon एसीटेट लाभहरू, Epithalon एसीटेट विरोधी उमेर को सुविधा, Epithalon एसीटेट ड्रग को अनुप्रयोगहरु र यस औषधि को बारे मा धेरै केहि चीजहरु जो धेरै को लागि जीवन सेवर हो।
हामी जान्न आइपुग्यो कि एथितलियन एसीटेट ड्रगले टेलोमेरेको आकार बढाउन मद्दत गर्दछ, जुन रक्त कोशिकाहरूमा उपस्थित हुन्छ जुन हाम्रो दिमागमा अवस्थित ग्रंथिबाट गुप्त हुन्छ। न केवल यो औषधि आँखा रेटिना रोड बढ्दो मुद्दामा मद्दत गर्दछ। यो व्यक्तिको व्यक्तिमा क्यान्सरको कोशिकालाई मार्न मद्दत गर्दछ।
त्यस पछि, हामी यस औषधि को तंत्र को बारे मा जान्दछौं र यस भाग को अगाडी बढायो जहां हामीले एपिथेलन एसीटेट ड्रग को आवेदन को बारे मा भन्यो। हामी पनि यस औषधिको फाइदाहरूको बारेमा जान्न आएका थियौ, जहाँ हामी यो औषधिको फाइदाहरू बारे जान्न आएौ।
त्यसबाट बाहिर निस्कन्छ, हामी यस एपिथल एसीटेट ड्रगको खुट्टाको बारेमा जान्दछौं। यस औषधि लिने व्यक्तिले सधैं यो औषधिको खुराकको ख्याल राख्नु पर्छ र निर्धारित रूपमा औषधि दिनुपर्दछ। अर्को बिन्दुमा, हामी यो दबाइ को दुष्प्रभाव को बारे मा जान्दछौं, र त्यस पछि, हामी यो दबाइ को भंडारण को बारे मा जान्दछन्। त्यहाँ केवल एक भण्डारण अवस्था थियो, र अन्तमा, हामी जान्दछौं कि कहाँबाट यो औषधि किन्न सक्छ र एक खरीद गर्दा कत्ति सावधानी लिनु पर्छ।